Ohatra amin'ny sakafo fisakafoanana | Creatives Online
Manana tetikasa hanaovana sakafo ho an'ny trano fisakafoanana ve ianao? Angamba ianao Mitady soso-kevitra hanolorana ny sakafonao sy hanaitra ny vahiny amin'ny antsipiriany voalohany? Na izany na tsy izany, mila ianao ohatra amin'ny sakafo fisakafoanana. Ary afaka manampy anao izahay.
Ary izany, na mino izany na tsia, ny sakafo amin'ny trano fisakafoanana dia iray amin'ireo antsipiriany manan-danja indrindra, ary ny ankamaroan'ny olona dia tsy miraharaha rehefa manomboka ny orinasany. Ka raha mitranga aminao izany dia hiresaka aminao izahay ary hanome ohatra anao.
1 Nahoana no zava-dehibe ny sakafo fisakafoanana
2 Toro-hevitra teo aloha mba hanaovana famolavolana sakafo fisakafoanana tsara
3 Ohatra amin'ny sakafo fisakafoanana
3.1 Menu sakafo ho an'ny trano fisakafoanana amin'ny 3D
3.2 Menu napetraka
3.3 Modely ho an'ny fivarotana kafe
3.4 Bokikely Menu
3.5 Lamba latabatra sakafo
4 Ahoana ny fomba fanaovana menus restaurant
Nahoana no zava-dehibe ny sakafo fisakafoanana
Eritrereto hoe mandeha any amin'ny trano fisakafoanana roa samihafa ianao. Mitovy ny vidiny, ary mitovy ny fomba. Na izany aza, rehefa tonga amin'ny iray ianao dia manome anao lisitra fototra amin'ny zavatra ananany toy ny lisitra misy ny vidiny. Amin'ny lafiny iray, ny iray hafa dia manolotra izany ho anao voasokajy araka ny lovia, amin'ny safidy gourmet ary koa manasongadina ny sakafo tsara indrindra misy sary. Raha vao jerena, inona no tianao kokoa amin'ity faharoa ity?
Un Ny sakafo fisakafoanana dia manampy amin'ny fivarotana bebe kokoaSatria ianao no mahatonga ilay olona ho "tia" amin'ny zavatra hitany ary azonao atao aza ny mampihinana azy bebe kokoa, izay amin'ny farany dia hahazo tombony bebe kokoa ho anao.
Raha ny mahazatra, ny Ny karatra menu dia havaozina indray mandeha isan-taona, hatrany am-piandohan'ny taona, ary tehirizina mandritra ny volana manaraka (raha tsy misy fiovana na manana menus samihafa arakaraka ny vanim-potoana na hanamafisana ny sariny). Izany no antony maha-zava-dehibe ny fananana ohatra maromaro momba ny sakafo fisakafoanana, mba hahafahana manova azy ireo rehefa ilaina nefa tsy mila manomboka hatrany am-boalohany.
Ankehitriny nahoana izy ireo no zava-dehibe? Satria fotsiny hoe manao zavatra tsara izy ireo? Tsy dia izany loatra. Izany koa dia satria miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka manasongadina ny sakafonao tsara indrindra, miaraka amin'ny sary fanoharana; na apetraho amin'ny fomba tany am-boalohany ny sakafo izay manampy ilay mpihinana hahatsapa fa ao amin'ny trano fisakafoanana hafa noho ny efa nalehany tamin'io fotoana io izy.
Amin'ny teny hafa, miresaka momba ny fanavahana miaraka amin'ny maha matihanina amin'ny asa tsara isika.
Toro-hevitra teo aloha mba hanaovana famolavolana sakafo fisakafoanana tsara
Alohan'ny hirosoana hanome anao ny sasany Ohatra amin'ny sakafo fisakafoanana Te-hanome toro-hevitra ho anao izahay mba hotadidina, tsy ny fisafidianana modely ihany, fa koa rehefa manolotra ny fampahalalana momba ny trano fisakafoanana.
Ary, ny iray amin'ireo toro-hevitra tsara indrindra dia ny mametraka hatrany an-tampony, ary amin'ny pejy hafahafa, ny sakafo mahasoa indrindra. Inona ireo? Eny, ireo izay mitondra tombony bebe kokoa ho anao (na satria zara raha mila akora izy ireo, na noho izy ireo vita amin'ny akora tena mora vidy). Amin'izay dia azonao antoka fa io no zavatra voalohany hitan'izy ireo.
Ankoatra izany, ny sakafo "kintana" dia tsy maintsy misy sary mba "hiditra amin'ny maso" ary miandrandra ny zavatra hitany sy ny hatsarany ny olona.
Ny fampiasana karatra sakafo tany am-boalohany dia toro-hevitra hafa. Adino ny mahazatra ary miloka amin'ny maoderina maoderina hafa, toy ny kanto na fomban'ny ankizy ho an'ny ankizy kely (zavatra tsy manana trano fisakafoanana maro ary mety ho fomba iray hanavahana ny tenanao amin'ny mpifaninana aminao).
Ary ankehitriny isika dia hahita ohatra amin'ny sakafo fisakafoanana. Ho an'ireo izay efa nomenay anao, ny die-cutting, na ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny ankizy dia afaka manampy ireto manaraka ireto:
Menu sakafo ho an'ny trano fisakafoanana amin'ny 3D
Raha raisina fa isaky ny misy 3D eo amin'ny fiainantsika andavanandro, amin'ity tranga ity dia tsy ho diso ny fampiharana azy amin'ny sakafo fisakafoanana.
Tsy manampy fotsiny izany mikitika ny sakafo ny mpihinana ary mihetsika ny fahatsapana fikasihana, nefa misy fiantraikany koa izany hoe hijery bebe kokoa ilay taratasy izy ireo ary afaka mangataka bebe kokoa.
Amin'ity tranga ity dia manome ohatra iray momba ny maodely efa vita izay ahitanao rakitra PSD efatra sy AI efatra hafa izay ahitanao ovao ny lahatsoratra sy sary rehetra miaraka amin'ny sakafo atolotra.
Mazava ho azy fa tsy maimaim-poana izany raha tsy misy tolotra amin'ny fotoana hidiranao ny rohy.
Modely ho an'ny fivarotana kafe
Na dia saika mieritreritra sakafo iray aza isika ary mampifandray azy ho azy amin'ny trano fisakafoanana iray, dia mety ho a cafeteria izay nanolotra sakafo maraina sy tsakitsaky. Ary mazava ho azy, tsy maintsy manao izany ho tsara tarehy ianao.
Eto ianao dia manana ity ohatra ity izay mampahatsiahy antsika ny endrika vintage ary, miaraka amin'ny maoderina.
Hitanao izany eto.
Araka ny fantatrao, amin'ny trano fisakafoanana maro dia mahazatra ny menu dia aseho amin'ny pejy feno, aloha sy aoriana, fa raha tokony homeny anao toy izany izy ireo dia mamadika azy ho triptych.
Ary eto ianao dia manana môdely izay ahitanao endrika kanto miaraka amin'ny fahafahana manova ny rakitra.
Mahazo izany ianao eto.
Lamba latabatra sakafo
Azonao sary an-tsaina ve fa nasiany lamban-databatra teo amboninao ary io indray no karatra sakafo? Eny, eny, tsy hoe hevitra tena tany am-boalohany izany, satria fantatsika fa misy trano fisakafoanana sasany, indrindra fa ny sakafo haingana, mampiasa azy io, fa mety hahaliana izany karazana trano fisakafoanana izany na ho an'ireo izay maoderina kokoa.
Ahoana ny fomba fanaovana menus restaurant
Azo antoka fa tianao ny sasany amin'ireo voalazanay ireo, sa tsy izany? Eny, tokony ho fantatrao fa misy môdely sakafo fisakafoanana maro azonao ampiasaina, na maimaim-poana na karama. Ireo dia miavaka amin'ny fanolorana ny famolavolana tsy mila manomboka amin'ny scratch. Ny hany tsy maintsy ataonao dia ny manampy ny fampahalalana sy ny sary izay nofidinao, ataovy tsara ny zava-drehetra ary manonta izany ho an'ny trano fisakafoananao.
Ho fanampin'ireo modely izay hitanao amin'ny Internet, koa Azonao atao ny mampiasa Canva, satria misy ifandraisany amin'ny sakafo fisakafoanana, ary koa ny Adobe Spark Na dia tsy be dia be aza izy dia afaka mamorona mora foana ny anao ianao amin'ny fanarahana ny dingana omeny anao.
Ankehitriny rehefa fantatrao ny fomba fanaovana ny karatry ny sakafonao ary manana ohatra momba ny sakafo fisakafoanana ianao, dia mila mandany fotoana kely fotsiny ianao mba hahazoana ireo môdely mifanaraka amin'ny orinasanao, na ny tetikasa eo an-tananao ary manolotra azy ireo amin'ny mpanjifanao. Izany dia hamonjy anao fotoana ary afaka manao fanovana mihitsy aza ianao mba hamoronana ny taratasinao haingana kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ohatra amin'ny sakafo fisakafoanana
Ahoana ny fomba fametahana GIF